August 29, 2021 1887
चर्चित बलिउड अभिनेत्री नेहा शर्माको वर्ष दिन पुरानो तस्बिर अहिले खुबै भा`इरल भइरहेको छ । नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । यो फोटो कुनै होटलको कोठाको जस्तो देखिन्थ्यो । बलिउडको दुनियाँ बाहिरबाट जति चमक`दार देखिन्छ भित्र भने त्यस्तो हुँदैन
बलिउडमा अभिनेत्रीहरु केहीले निकै सफ`लता पाइरहेका छन् केही भने निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्को`तर्फ केही कलाकार आफैंले चाहेर वि`वादित बन्छन् भने केहीलाई अरुले विवादित बनाइ`दिन्छन् । अरुका कारण बदना`म हुनुपर्ने अनित्रीको सुचीमा नेहाको नाम पनि आएको हो ।
एउटा सेल्फी अरु कसैले सम्पा`दन गरेर ट्वीटरमा अप`लोड गरिदिँदा उनले धेरै बदना`मी खेप्नु परेको थियो । अहिले उनको त्यही तस्विर भाइरल भइरहेको छ । उनले आफ्नो फोटो सम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरिन् ‘आखिर मानिसहरु कतिसम्म तल झर्न सक्छन् ?’
नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । उनले अप|लोड गरेको फोटो सामा|न्य थियो तर कसैले यो फोटो डाउन|लोड गरेर सम्पादन गरी पुनः ट्वीटरमा पोस्ट गरिदियो ।
ती व्यक्तिले यो फोटो एडिट गरेर त्यसमा से’क्स टो’य थपिदिएका कारण नेहाको फोटो निकै भाइर|ल भयो । केही प्रयोगकर्ताले यसलाई साँच्चैको ठानेर रिट्वीट गरिदिँदा यो फोटो त्यो बेला खुबै भा|इरल भएको थियो । यसका कारण नेहाले बद`नामीको सामना गर्नुपर्यो ।
फोटो भाइ`रल भएपटि ट्वीटरमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थाले । केहीले कुरै नबुझी नेहालाई अ’पशब्द समेत भन्न भ्याए केहीले भने नेहाको साथ दिए ।
जब यो फोटो स्वयं नेहाले देखिन् त्यसपछि उनले वास्तविक फोटो पोस्ट गर्दै यो सबै फोटो बिगारेर बद’नाम गराउने ग’लत नियतले गरिएको बताइन् । त्यसपछि नेहालाई गा`ली गर्नेहरुको भीड कम भएको छ ।
Prevठ्याक्कै मेस्सीजस्तै देखिने व्यक्ति: मेस्सी हुँ भन्दै ढाँटेर २३ महिलासँग ‘सम्बन्ध’ राखेको आ’रोप !
Nextरावलको नेपाललाई जवाफ: अगाडि धकेल्दा धकेलिने भए पछाडि फर्काउन खोज्दा फर्किनु`पर्ने हो
बिहे पछिको आँचलको पहिलो तीज ब्रत ! यस्ती देखाईन् सारिमा (६ तस्बिर)